डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनमा छलफल सुरु
- नेपाली सन्देश मङ्लबार, साउन ८, २०७५ , 6.4K जनाले हेर्नुभयो
डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनमा छलफल सुरु गरेको छ।
संसदमा दर्ता चिकित्सा शिक्षा विधेयकका के–के बुँदा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङ, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा र माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाबीच सोमबारबाट छलफल भइरहेको छ।
उनीहरूले विधेयकमा संशोधन गर्न सकिने बुँदाबारे आफ्नो तर्फबाट धारणा बनाएपछि मंगलबार डा. केसीका वार्ताकारसँग कुराकानी गर्नेछन्। त्यसपछि डा.केसीलाई संशोधित बुँदा देखाएर सहमति लिन प्रयास गरिने स्रोतले बतायो।
‘भोलि वा पर्सिसम्म टुंगोमा पुर्याउन खोजिरहेका छौं,’ नेकपाका एक नेताले सोमबार राति सेतोपाटीसँग भने।
यसअघि सोमबार दिउँसो नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबीच यो मुद्दा कसरी हल गर्ने भनी कुराकानी भएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली बैठक सकिएपछि युरोप भ्रमणमा गएका थिए। उनी चार दिनपछि मात्र फर्कनेछन्।
दुई जना मन्त्रीसहितको बैठकले राजनीतिक तहमा कुराकानी गरेपछि प्राविधिक रूपमा सल्टाउने जिम्मा नेम्वाङलाई दिइयो। उनले त्यसपछि बाँस्कोटा र माथेमालाई डाकेर छलफल सुरु गरेका हुन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र दस वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेज सम्बन्धन नदिने, लगातार तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने लगायत बुँदा विधेयकबाट हटाइएका छन्।
हटाइएका बुँदाले मनमोहन अस्पताल, बिएन्डसी, काठमाडौं नेसनल र मेडिसिटीलाई फाइदा हुन्छ। यी चारैवटा अस्पताल सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा निकट व्यवसायीले खोलेका हुन्।
डा. गोविन्द केसी सोमबार अनसनको २४ औं दिनमा। यो अहिलेसम्मकै लामो अनसन हो। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
यही विधेयकको विरोधमा जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गएर अनसन बसेका डा. केसीलाई सरकारले गत बिहीबार जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याएको थियो। सोमबार उनी अनसन बसेको २४ दिन पूरा भएको छ। यो अहिलेसम्मकै लामो अनसन हो।
यसबीच सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल डा. केसीविरुद्ध आक्रामक ढंगमा प्रस्तुत भएका थिए। डा. केसी कांग्रेस लगायत दलको बहकाउमा लागेको उनीहरुको आरोप थियो। यसले सरकार वार्ता प्रक्रियाबाट टाढिँदै गएको हो कि भन्ने धेरैले आशंका गरेका थिए।
यता सरकारले भने वार्ताबाटै केसी अनसन टुंगोमा पुर्याउने निष्कर्ष निकाल्दै दोस्रो तहका नेतालाई काममा लगाइसकेको थियो।
स्रोतका अनुसार यही विषयमा सोमबार राति अबेरसम्म बालुवाटारमा वाम शीर्ष नेताहरूको बैठक जारी छ। आइतबार पनि शीर्षनेताहरूबीच यो विषय वार्ताबाटै टुंगो लगाउनेबारे छलफल भएको स्रोतले बतायो।
नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ आइतबारै डा. केसीलाई भेट्न अनसनस्थल पुगेका थिए। उनले डा. केसीलाई ‘तपाईंको जीवन ठूलो हो, कम्तिमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिनुहोस्’ भनेका थिए। त्यही क्रममा अनसनस्थलमै श्रेष्ठ र डा. केसीको वार्ता टोलीबीच औनपचारिक कुराकानी पनि भयो।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले शनिबार पनि केसीको वार्ता टोलीलाई भेटेर यो मुद्दा सल्टाउन कसरी जान सकिन्छ भनी छलफल गरेका थिए।
यसअघि केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै मनमोहन अस्पताल वीरलाई बेच्ने सहमति भएको थियो।
वीरले उक्त अस्पताल किन्ने र वीरको नाम फेरेर मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राख्ने सहमति भएको हो। मनमोहनका सञ्चालकहरूले यसमा लिखित सहमति गरेका थिए।